Ọrụ TPI - Shandong QILU Industrial & Trading Co., Ltd.
Kedu ihe kpatara Qilu
OLlọ ọrụ ígwè
Deep uzo Ball biarin
Industries Na-eje Ozi
Kedu ihe bụ nyocha nke atọ?
Anyị niile achọpụtala nyocha nke ndị ọzọ na otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ. Fọdụ maara ya nke ọma, ebe ndị ọzọ nwere ike ịnwe ajụjụ ole na ole n'uche.
Nke a na-enye nlezianya anya na nyocha nke atọ gụnyere na ihe ụlọ ọrụ nwere ike irite n'aka ha.
Nnyocha nke atọ , ma ọ bụ TPI, bụ okwu a na-eji maka ọrụ nyocha na-enweghị ele mmadụ anya n'ihu nke ụlọ ọrụ ruru eru nyere.
Enwere ụdị nyocha atọ a na-ahụkarị n'ebe ahụ. Ndị nrụpụta nke mbụ na-arụ ọrụ nyocha nke onwe ha. Onye nyocha ma ọ bụ otu ndị na-azụ ahịa n'ime ụlọ na-eme nyocha nke abụọ.
Ọzọ inspections na-mere nwere onwe ụlọ ọrụ, na-emekarị goro site na asịwo, iji hụ na niile na ngwaahịa ndị ka mkpa quality ọkọlọtọ na n'ichepụta usoro onwe ya na-ezukọ na mba ụkpụrụ na okwu nke àgwà management usoro (ISO 9001), na-elekọta mmadụ omume a nabatara (SA 8000) na njikwa gburugburu ebe obibi (ISO14000).
Eleghị mmadụ anya n'ihu
Otu uru dị na nyocha nke atọ, ma ọ bụghị nke ndị nrụpụta ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa na-arụ, bụ na ndị nyocha na-eme TPI enweghị obi abụọ n'akụkụ abụọ ma nwee ike ịkọwa mkpebi ziri ezi na-enweghị imebi ọdịmma nke otu ọ bụla. - mgbe, n'ezie, na-achọ onye ahịa na ihe ndị a chọrọ chọrọ. N'okwu dị mfe, mkpebi ha ga-emetụta naanị eziokwu siri ike ma ndị sonyere n'ichepụta ọrụ ga-enwe ike nweta nkọwa doro anya nke ebe ha kwụ na ọrụ ugbu a.
Ọzọ inspections -abụkarị nke ụlọ ọrụ ndị enyere aka na ISO 9001, yana AQSIQ nwere ikikere (mgbe ụlọ ọrụ njikwa ogo na-enye ọrụ ya na China) nwere ahụmịhe bara uru, ndị a zụrụ azụ na ndị ọkachamara pụrụ iche na ụdị ngwaahịa ole na ole ma ọ bụ ọtụtụ. Họrọ ezigbo onye nyocha nke atọ bụ ihe dị mkpa iji hụ na njikwa njikwa mma maka ndị ahịa.
Mylọ ọrụ m ọ ga-erite uru na nyocha nke atọ?
Imirikiti ụlọ ọrụ na-atụle nyocha nke ndị ọzọ dị ka ego a kwadoro nke ọma. Ndị ụlọ ọrụ nwere ọrụ siri ike na-arụ ha, na-arụ ọrụ na ala kwa ụbọchị. Ha na-enye echiche na-anọpụ iche na ngwongwo ngwongwo ma na-enye ohere ilegide anya na njikwa ogo na saịtị na-enweghị ịnọ.
Zọ a, ndị na-azụ ahịa maara nke ọma ọbụna n'ebe dị anya, nke usoro nrụpụta, ma nwee ike ịme mmekọrịta siri ike na onye na-ebu ngwaahịa. Ọzọkwa, n'agbanyeghị ị na-eri ihe, TPI na-ejedebe ịchekwa gị ego site na ịnyere aka izere njehie dị oke ọnụ ma ọ bụ were ndị otu QC otu ụlọ.
Oge mgbe achọrọ nyocha nke atọ
Na-arụ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa ọhụrụ
Chọpụta nsogbu dị mma n'oge
Ugboro ugboro ngwaahịa mma mbipụta (ma anyị ga-kama izere iji nweta nkwubi okwu a na inyocha ngwongwo maka niile Mbupu, na dị iche iche nkebi nke mmepụta usoro - ọ ga-eri ihe na-erughị nwere idozi àgwà mbipụta na soplaya na ibu ugbua Ẹnam ekese )
Zụta ihe ndị dị oke ọnụ: elektrọnik dị elu, akụrụngwa ụlọ ọrụ, wdg.
Kwesịrị inwe mmasị na ọrụ nyocha nke ndị ọzọ, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị, anyị ga-enwe obi ụtọ ịlele gị!
Etu esi ehicha nchara Carbon nchara
Igwe carbon nwere ọtụtụ ngwa. Dị ka ihe siri ike a na-eji ya ewu ụlọ, akụrụngwa, ụgbọala na akụrụngwa. Carbon ígwè dị nchara nchara, yabụ n'ọtụtụ ọnọdụ nchara nwere nchara na-egosi nchara ...
Copyright - 2017: All Rights echekwabara. - Ike site Globalso.com